Maxkamadda gobolka Banaadir oo xukun ku diray dad lagu soo qabtay maandooriye “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Howlgalkan ay ka sameeyeen ciidanka Booliiska Soomaaliyeed oo kaashanaya maamulka degmada Xamar Jajab ayaa waxa ay ku soo qab qabteen in ka badan 30 qof oo isugu jira rag iyo haween kuwaasi isticmaalayay maandooriyaha sida xashiishka, khamriga iyo qalabkii lagu karinayay maandooriyaasha.
Intaas kadib dadka lagu soo eedeeyay inay lagu soo qabtay waxyaabaha maanka dooriya ayaa la hogeeyay maxkamada gobolka banaadir oo u fadhiisatay dacwacwad ciqaabeedkii loo haystay eedeysanayaasha, taasi oo maxkamadda gobolka banaadir ay ku sii deysay 4 qof oo ka mid ahaa eedeysanayaasha kaddib markii lagu waayay eedeymihii loo haystay, waxeyna maxkamadda gobolka banaadir markii ay dhageysatay marqaatiyaashii ay ku xakuntay 27 qof min lix bilood oo xabsi ah
Taliyaha saldhiga booliska Afar Irdood ee Degmada Xamar weyne Gaashaanle dhexe Cabdiqaadir Axmed Shire Matooto ayaa sheegay in howlgalka ay ka sameeyen qeybo ka mid ah degmada Xamar Jajab lagu guuleystay, fursadna loo helay in maxkamadda lala tiigsado.
“Howl galkan waxaa ka howl galay ciidanka booliiska Soomaaliyeed, saldhiga Xamar Jajab iyo saldhiga booliska degmada Xamar weyne runtii, wuxuuna u dhacay sida loogu tala galay, waxaana lagu soo qabtay dadkii isticmaalayay maandooriyaha iyo qalabkii lagu karinayay” ayuu yiri taliyaha Saldhigga booliska Afar Irdoodka.
Gudoomiyaha Degmada Xamar Jajab Axmed Cisman Dhooro oo ka hadlay goobta ayaa tilmaamay in howlgalka uu mira dhalay, laguna guuleystay in lagu soo qabtay 31 qof oo ku howlanaa waxyaabaha maanka dooriya.
Guddoomiyaha Maxkamadda gobolka banaadir Xaashi Cilmi Nuur ayaa sheegay in 27 ka mid dadka lagu xakumay min lix bil oo xarig ah, halka uu ku dhawaaqay in maxkamadda ay sii deysay afar qof, taasi oo wadarta guud ka dhigeysa 31 qof.
“Maxakamadda wareegta waxey u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay dad lagu soo qab qabtay howlgal ay sameeyeen ciidanka booliska, kuwaasi oo lagu soo eedeeyay in ay isticmaalayeen waxyaabaha maanka dooriya iyo bistolad, waxayna maxkamadda ku xakuntay 27 qof min lix bil oo xabsi ah”ayuu yiri Guddoomiyaha Maxkamadda gobolka Banaadir.